गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउने कार्यक्रम किन असफल ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperगरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउने कार्यक्रम किन असफल ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउने कार्यक्रम किन असफल ?
दिगोपनमा आधारित स्पष्ट कार्ययोजना अभावमा गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउने प्रदेश १ सरकारको कार्यक्रम असफल बनेको छ ।
गरिबका छोराछोरी पनि डाक्टर बन्नुुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित उनीहरूको एमबीबीएस अध्ययनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा प्रदेश सरकारले ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ को अवधारणा अघि सारेको थियो ।
आव २०७५र०७६ मा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको पहलमा कोष स्थापना गरिएको थियो । पछौटेपनको सिकार भएका गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकका छोराछोरीलाई लक्षित गर्दै सरकारले उक्त कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
प्रदेशको प्रत्येक स्थानीय तहबाट एक(एकजना चिकित्सक उत्पादन नभएसम्म उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना थियो । तर, आव २०७५र०७६ र ०७६र०७७ पछि उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन ।
पहिलो वर्ष कार्यक्रम खासै प्रभावकारी साबित हुन नसकेपछि ०७६र०७७ मा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्र पाँचजनाको सिट छुट्याएर आवेदनका लागि सार्वजनिक सूचना निष्कासन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, बुढीगंगाको विराट मेडिकल कलेज, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र संखुवासभाको अस्पताललाई समेत आवेदनका लागि सूचना पठाएको थियो । तर, २०७६र०७७ मा भने उक्त कार्यक्रममा एउटै आवेदन परेन ।
वर्ष ०७६र०७७ मा एउटै आवेदन नपरेपछि सरकारले ०७७र०७८ देखि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न छाडेको हो । मन्त्रालयले भने सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर उक्त विषय पढाइ हुने विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको विद्यार्थीहरूलाई सरकारको उक्त कार्यक्रमका लागि योग्य ठानेको थियो ।
उचित प्रचारप्रसारको अभावमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरू सरकारको उक्त कार्यक्रमबारे अझै पनि अनभिज्ञ छन् । अधिकांश विद्यार्थीहरूलाई कार्यक्रम के हो रु यसको प्रभावकारिता कति छ रु लगायतका विषयबारे कुनै जानकारी छैन । कार्यक्रमबारे आवश्यक जानकारीको अभावमा योग्यता पुगेका विद्यार्थीहरूले पनि आवेदन दिएका छैनन् । कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएकाले आफूले आवेदन नदिएको नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छात्रा भूमिका जैनले बताइन् ।
यद्यपि, आव २०७५र०७६ को पहिलो र दोस्रो सूचनाका आधारमा आवेदन दिएका आठजना विद्यार्थीहरू भने हाल सरकारकै अनुदानमा प्रदेशका विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत छन् । उनीहरू ललितपुरको पाटन मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज, काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज, धरानको बीपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठान र वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।